WAMU wetara Redio ka Ndị Ntị Na-anụ Ntị na Ndị Ntị siri ike na ENCO enCaption4 | NAB Gosi News | 2021 NAB Gosi Onye Mmekọ na Onye Mmepụta nke NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa
Home » News » WAMU wetara Redio na Ndị Ntị na Ndị Ntị Nụrụnụ na ENCO enCaption4
Mgbasa ozi mgbasa ozi ọha na eze na-eme ka ihe ntinye ederede na-akpaghị aka iji rute mpaghara nke obodo enweghị ike ịnweta mmemme redio
Novi, MI, Eprel 8, 2021 - Na-etinye aka na mpaghara Washington, DC, mpaghara ndị otu NPR WAMU (88.5 FM) na-ejikọ ndị Washington na ibe ha na ụwa site na mmemme na-egosipụta ọnọdụ pụrụ iche nke mpaghara ya. Na-agbasi mbọ ike iru otu mpaghara obodo na-enweghị ike ịnụ ụtọ mmemme redio, onye mgbasa ozi ọha na eze ọhụụ tinyere usoro ntinye okwu enCaption4 ENCO iji nye, ndetu ederede akpaghị aka nke ọdịyo dị na igwe ya na ndị ntị chiri na ndị na-anụ ihe siri ike site na webụsaịtị ya.
Mpaghara Washington bụ ebe obibi nke ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ntị chiri na ndị na-anụ ihe siri ike, gụnyere ihe dị ka ụmụ akwụkwọ 1500 na Mahadum Gallaudet. Ihe nkwanye ugwu maka WAMU n’isi okwu butere ya bụ mgbe onye ndọrọndọrọ ọchịchị onye ntị chiri na-achọ ọfịs na Washington rịọrọ ka ọ pụta n’ama ama ama ọdụ a na-akpọ Kojo Nnamdi Show ma chọọ ka ihe ga-esi na ya pụta bụ nke ndị niile bi na ya. Rob Bertrand, onye isi nduzi teknụzụ na WAMU kwuru, "N'oge ahụ, ọ bịara doo anyị anya na anyị anaghị efe akụkụ ahụ dị mkpa nke ndị bi na mbụ ma na achọrọ maka iweta ọdịnaya anyị na ndị a na-ege ntị."
WAMU jiri onye na-eweta ọrụ ya na ndetu mmadụ dị ndụ na ntụgharị asụsụ ogbi ndụ maka mgbasa ozi ahụ, mana amata na ụzọ dị iche ga-adị mkpa iji jeere obodo a ozi na-aga n'ihu. Bertrand kọwara "oge nke ọdịnaya nwere ike ịbụ nke a na-ejighị n'aka, nke pụtara na anyị enweghị ike ịhazi onye ntụgharị okwu ma ọ bụ onye ntụgharị asụsụ ndị ogbi." “Anyị ghọtara na e nwere ugbu a na teknụzụ nke ga-enye anyị ohere ịmegharị usoro a. Akpaghị aka mechie ihe nchịkọta dị adị maka telivishọn ruo oge ụfọdụ. Gịnị ma ọ bụrụ na anyị nwere ike iwere akụrụngwa iji mepụta nkọwa maka TV, ma were ya maka redio iweta nkọwapụta na weebụsaịtị anyị? ”
Ka WAMU nyochara ihe ntinye ederede akpaaka nke ndị na-agbasa ozi TV na-eji, ENCO enCaption4 pụtara. "EnCaption4 nwere ezigbo aha, yana ọtụtụ nzaghachi ziri ezi site na ndị mgbasa ozi na-eji ya maka telivishọn," ka Bertrand kwuru. "Anyị mere ngosi ngosi nke enCaption4, ndị otu webụsaịtị anyị wee wepụta otu ụzọ iji gosipụta isi okwu ndị ọ na - emepụta na websaịtị anyị."
A na-agbanwe ọdịyo sitere na azụ azụ ọdịyo-nke-mbu nke WAMU nke Telos Alliance Axia site na Axia xNode gaa akara AES / EBU nke na-arụ ọrụ dị ka ntinye na enCaption4. enCaption4 na-etinye otu ụzọ mgbaàmà ikuku na-adaba na transmitter WAMU na encoders gụgharia n'ịntanetị, na-enyere ndụ aka, ntinye 24/7 nke ọdịnaya WAMU niile dị na ikuku. A na-enyezi isiokwu ndị enCaption4 kere na webụsaịtị nke ọdụ ebe a na-egosipụta ha na ibe transcript raara onwe ha nye.
Na mgbakwunye na ito ntụkwasị obi nke enCaption4, Bertrand gosipụtara izi ezi nke nkọwa ya dị ka klaasị kacha mma maka ngwa ndụ. "Live captioning na oge na-enweghị ike ịbụ dị ka zuru okè dị ka nhazi ndekọ audio mgbe eziokwu, ma enCaption4 bụ n'ezie ezi," kwuru Bertrand. "ENCO bụ onye ndu na-ebi ndụ captioning na-eme nke a ka mma na ozugbo na n'ụzọ zuru ezu akpaghị aka ụzọ karịa ihe ọ bụla ọzọ ihe ngwọta anyị na-ahụ gafee."
E wezụga uru nke ngwaahịa enCaption4, Bertrand nwekwara afọ ojuju na nkwado ENCO maka ebumnuche WAMU. Ọ kọwara, "Anyị na-eme nke a iji melite ọrụ anyị maka ọha na eze, ma na-agbanwe ihe ọhụrụ ka anyị na-aga. “Nke ahụ gụnyekwara mgbanwe ndị ọzọ na ntanetị teknụzụ anyị, anyị na-arụkwa egwu ahụ ka anyị na-eweta ụgbọ oloko ahụ. ENCO abụwo ezigbo onye mmekọ maka atụmatụ a, enwere m obi ụtọ n'ezie iso ha rụọ ọrụ. ”
Ihe oru ngo nke WAMU meputara obere ihe ma na-eguzosi ike n'ihe, ya na ihe dika ndi mmadu 150 na-ele anya na ntinye ihe ndi ozo maka ihe dika nkeji 30 kwa ubochi - onu ogugu ndi kwesiri ka ha too ozugbo WAMU malitere ikwalite nnweta ha nye ndi mmadu. “Nsonaazụ anyị egosiworị njikọ miri emi, yana na ọrụ a bara uru na ngalaba nke ndị mpaghara anyị na-ejibu ọdịnaya anyị rụ ọrụ,” ka Bertrand kwuru.
WAMU na-ezube igbalite sistemụ njikwa ọdịnaya ya iji kwe ka njikọta nke isi data data ya na enCaption4, wee si otú a na-enye akwụkwọ ọkọwa okwu nke ga-emewanye ka izi ezi nke nkọwa WAMU na nsụgharị nke aha obodo na ihe omume siri ike. Ọdụ ahụ na-ezube ịmekọrịta nkọwapụta ndị ahụ ozugbo n'ime ihe ọkpụkpọ isi iyi ya. Agbanyeghị, ọbụlagodi tupu nkwalite ndị a, onye mgbasa ozi ahụ na-ele atụmatụ ntinye redio ya anya nke ọma.
“Anyị kwenyere na ọdịnaya anyị mepụtara nwere ihe ọ pụtara na ike maka ọha na eze nke mpaghara Washington ka ukwuu, anyị nwekwara obi ụtọ na anyị nwere ike iru akụkụ a dị mkpa nke ndị bi na redio, dị ka usoro ọdịyo, enwebeghị ike ịkọ akụkọ ihe mere eme na akụkọ ihe mere eme. , ”KaBertrand kwuru. "Ebumnuche anyị bụ ịkọwa ma mee ka onye ọ bụla nwee ike ịba ọgaranya n'obodo, na ENCO na-enyere anyị aka imezu ebumnuche ahụ n'ụzọ na-agaghị ekwe omume na mbụ."
Tọrọ ntọala na 1983, ENCO sụrụ ụzọ n'iji kọmputa, ọdịyo dijitalụ na igweaka programmụ maka redio na ụlọ ihe nkiri TV. Sincelọ ọrụ ahụ agbagola n'usoro akara aka na-agbata n'ọsọ iji gbasaa akụkụ niile nke mgbasa ozi akpaaka na nrụpụta arụmọrụ nke gụnyere akpaaka mepere emepe, redio anya, nrube isi, oghere mgbasa ozi, ntinye aka na ntanetị, na nbudata webata na igwe ojii. Ọ na-eweta abamuru nke njikwa ya na ibipụta egwu audio na vidiyo na-arụ ọrụ na gburugburu AV ọkachamara yana ụlọ nzukọ, ụlọ nzukọ, ebe a na-egwu egwuregwu na ebe a na-eme ihe omume. Maka ozi ndị ọzọ, biko gaa na: www.enco.com.
Kacha ọhụrụ posts site Dimension PR (-ahụ ihe niile)
TSG, Vislink Onye Mmekọ iji kwado Nkwalite Ntanetị ATSC 3.0 nke Ọchịchị na Alabama Public Television - May 3, 2021
Nkwukọrịta CP na-agbakwunye CamSTREAM SRT na-eto Eto Ezinaụlọ Red Streaming Streaming - April 8, 2021
WAMU wetara Redio na Ndị Ntị na Ndị Ntị Nụrụnụ na ENCO enCaption4 - April 8, 2021
Previous: Bacho Soro EditShare dị ka Onye isi oche nke Ahịa maka Europe, Middle East, na Africa
Osote: Nkwukọrịta CP na-agbakwunye CamSTREAM SRT na-eto Eto Ezinaụlọ Red Streaming Streaming